Iiprojekthi | Igalari ye-ROYI ART
BATHEMBA I-ROYI I-ART
Siyabuhlonela ubumfihlo bomthengi ngamnye kwaye asinakho ukupapasha uluhlu lwabathengi bethu kodwa babandakanya ezona zinto zixabisekileyo kunye nezihlonitshwayo kwihlabathi.
Nxibelelana nathi, sikulungele ukwenza ixabiso elibonisa ukhuphiswano lwakho.
Nyanga nganye sinikezela ngamakhulu epeyinti kubathengisi nakwabathengisi behlabathi jikelele.
Ewe siyabuhlonela ubumfihlo babathengi bethu kwaye asinakupapasha uluhlu lwabathengi bethu kodwa zibandakanya ezona zinto zibalulekileyo nezaziwayo ehlabathini, uninzi lwazo ngamagama ehlabathi jikelele.
Inkonzo yabathengi Injalo nje ngaphandle
Kunye nokuhambisa imisebenzi yobugcisa ekumgangatho uphakamileyo, sikwabonelela ngenqanaba lenkonzo onokuthi ufumanise kuphela kwigalari ephezulu. Lonke inyathelo lendlela onokuthi ukhethe ngayo ifowuni kwaye uthethe nathi-nokuba ufuna ukukhetha upende, ujonga imeko yomyalelo okanye ucela utshintsho. Iqela lethu lenkonzo yabathengi liyafumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku kwi-intanethi.
Ukuba ukurhwebo okanye umthengisi othengisela izinto ezinje ngeGalari yobugcisa, ifreyim yeli phepha, umyili wangaphakathi, isitolo sempahla, umakhi, umakhi, ivenkile yakudala, ubugcisa bezinto zobugcisa kunye neVenkile yokuthengisa, sinikezela ngezaphulelo ezikhethekileyo zorhwebo kunye namanye amalungelo awodwa azifumaneki kwiwebhusayithi yethu ngokubanzi.
Sizimisele ukukunikezela ngezaphulelo ezikhethekileyo zorhwebo kwaye masixabise ixabiso lokuphucula ukhuphiswano lwakho!
Contemporary Oli Ukupeyinta , neeBhari lokukhwelisa , Ukupeyinta On Isinikezeli-Oli , Abstract Oli Ukupeyinta , Akahlali Oli Ukupeyinta , Oli Umzobo , i- Zonke Products